Thit Htoo Lwin: 10/9/11 - 10/16/11
19/05/13 - 26/05/13 (198)
သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦး ပါးရိုက် တဲ့အမှု ဒီနေ့စစ်ဆေး
ရန်ကုန်၊အောက်တိုဘာ ၁၈ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စောင်ရေအများဆုံးထုတ်ဝေဖြန်.ချီနေသည်.
7 Day သတင်းဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် မအေးသူစံ၏ အင်တာဗျူးတွေ.ဆုံမေးမြန်းမှုကို ပြောကြားနေစဉ် ကိုယ်ထိလက်ရောက် တုံ.ပြန်ခဲ့သောကြောင့် တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရသော ထက်ထက်မိုးဦး၏အမှုအား အောက်တိုဘာ ၁၈ရက်နေ.တွင် ရန်ကင်းမြို.နယ်တရားရုံးက ပုံမှန်ရုံးချိန်ထက်စောပြီး နံနက် ၉နာရီခန်.တွင် စတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်ကို တွေ.ရှိရသည်။ ခရမ်းရောင်အထက်အောက်ဝတ်ဆင်ထားသော ထက်ထက်မိုးဦးသည် နှစ်ဖက်သဘောတူညှီနှိုင်းထားသည်. ရုံးချိန် နံနက်၈နာရီခွဲအားကျော်ပြီးမိနစ်၄၀ခန်.နောက်ကျပြီးမှ အမျိုးသားဖြစ်သူနျင့်အတူ Super Custom ယာဉ်အမှတ် ၈/၂၄၃၅နှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းနေ.တရားခွင်စစ်ဆေးမှုမစတင်မိ ရန်ကင်းမြို.နယ် တရားသူကြီးက သတင်းထောက် မအေးသူစံအား သတင်းမီဒီယာများသို. ဖြေကြားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ၉နာရီ၂၅မိနစ်ခန်.တွင် တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲခြင်းခံထားရသူ ထက်ထက်မိုးဦးအား စစ်ဆေးကြားနာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။၂၀၁၀ပြည်.နှစ်မေလ၁၆ရက်နေ.ညတွင် စတင်ခဲ့သော ယင်းအမှုသည်တစ်နှစ်ကျော်ကာလထိတိုင်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အပြိုင် ရုံးချိန်ပေါင်း (၅၃)ကြိမ်တွင် သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးမှ နှစ်ပတ်ဆက်တိုက် နှစ်ကြိမ်လာရောက်စစ်ဆေးခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နာရီ၁၅မိနစ်အကြားစစ်ဆေးသောတရားခွင်ပြီးဆုံးပြီးနောက် သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးနှင့်အမျိုးသားတို.မှာ
တရားရုံးပြင်ပတွင် စောင့်ဆိုင်းနေသူ ပရိသတ်များနှင့် သတင်းမီဒီယာများကို တွေ.ဆုံခြင်းမရှိဘဲ တရားသူကြီးရုံးခန်းတွင် ၅မိနစ်ခန်.မျှကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက် လူရှင်းသွားသည်.အခါမှ တရားရုံးခန်းအတွင်းမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးနှင့်အမျိုးသားဖြစ်သူ မော်တော်ယာဉ်ပေါ်သို.မတက်ခင် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်များက ဓာတ်ပုံသတင်းရိုက်ယူခြင်းမပြုနိင်ရန် ထက်ထက်မိုးဦး၏ရှေ.နေ.များက ခန‘ာကိုယ်ဖြင့်ဝိုင်းကာခဲ့ကြပြီး ၄င်း၏လက်ရှိအမျိုးသားဖြစ်သူဇူးမြတ်ထက်က အမျိုးသမီးသတင်းထောက်များအပါအ၀င် သတင်းထောက်များကို ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆိုခြင်း၊ ခြေဖြင့်လှမ်းကန်ခြင်း၊မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ထွက်ခွာရာတွင် လက်ခလယ်ထောင်ပြခြင်းများ စသည်.မယဉ်ကျေးသည်.အမူအရာပြုမူခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ.ကြုံခဲ့သူများက ပြောကြားသည်။ “ အရှေ.ဆုံးမှာရပ်နေတာ ပြည်မြန်မာက မိန်းကလေးသတင်းထောက်နဲ. Messenger ကအမျိုးသားသတင်းထောက်တစ်ယောက်ပါ။ခြေနဲ.ကန်တာထိလို.ကတော့ သေချာပေါက်ထပ်ပြီးတရားစွဲရမှာပါ“ဟု နိုင်ငံရေးသတင်းများကို ဦးစားပေးဖော်ပြနေသည်. ပြည်တွင်းထုတ်သတင်းဂျာနယ်တစ်စောင်မှ အယ်ဒီတာအဖွဲ.၀င်တစ်ဦးကဆိုသည်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုမူခဲ့သောကြောင့် တရားစွဲခံရသူ ထက်ထက်မိုးဦးနှင့် သတင်းထောက်များအား ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းစွာပြုမူခဲ့သူ ဇူးမြတ်ထက်တို.အား ယင်းကဲ့သို.ပြုမူရလောက်သည်.အဓိကအကြောင်းရင်းကို
သိရှိလိုသောကြောင့် ထက်ထက်မိုးဦး၏ ဖုန်းအား The Voice Weekly က ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရရှိခဲ့သော်လည်း လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပေ။ သတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် တရားခွင်အတွင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်နှင့် အသံဖမ်းယူခွင့်မရှိသော်လည်း တရားရုံးပြင်ပတွင် လွတ်လပ်စွာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပိုင်ခွင့်ရှိပြီး မိမိ၏အခွင့်အရေးအားထိပါးနှောင့်ယှက်ခံရပါက ပြန်လှန်တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရှေ.နေ.တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းဂျာနယ်များတွင် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် လူငယ်သတင်းထောက်များအတွက် ဆောင်းပါးရေးသားနေသူ လူထုစိန်ဝင်းက ယင်းအပြုအမူကြောင့်မိကောင်းဖခင်သားသမီးမပီသရာကျပြီး Celebrityများအနေဖြင့်မကောင်းသော အပြုအမူနှင့် အပြောအဆိုဆင်ခြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊မီဒီယာသမားများအနေဖြင့်လည်း
တုံ.ပြန်ရိုင်းစိုင်းမှုများ မပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပြီး ယဉ်ကျေးစွာ ပြုမူရမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားသည်။ နိုင်ငံရေးသတင်းများကို ဦးစားပေးဖော်ပြနေသည်. ပြည်သူခေတ်ဂျာနယ်မှ ဆရာမောင်ဝံသကမူ ” ကိုယ့်မှာသက်သေရှိနေတာ တရားစွဲဖို.ကောင်းတယ်။ သတင်းသမားဆိုတာ Professional လုပ်နေတာ၊ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဖို.လိုသလို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးရမယ် ” ဟု The Voice Weekly၏မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားသည်။ ဆရာမောင်ဝံသကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန်တွင် ၄င်း၏နေအိမ်သို.ရောက်ရှိနေသူ စာရေးဆရာ ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုထံမှ ဆရာမောင်ဝံသ၏ထပ်မံဆက်သွယ်ပေးမှုအရ ထင်မြင်ချက်ရယူခဲ့ရာ အကြောင်းမဲ့စော်ကားနေမှုများကို ဥပမာဖြစ်သွားနိုင်သဖြင့် သည်းခံရန်မသင့်ကြောင်း၊ပညာခေတ်ဖြစ်သည်.အတွက် ပညာနဲ.အလုပ်လုပ်လုပ်ကြရန်လိုကြောင်း ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဦးမြင့်သိန်းဖေကို The Voice Weekly က ညနေ၄နာရီမိနစ်၅၀ ခန့်တွင် ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ အကြောင်းရင်းတစုံတစ်ရာကို မသိရှိရသေးကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။ Written by ( AS ,AAT )
10/18/2011 11:31:00 PM
ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် များ
မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်တွေဟာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO
ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့အနီး ၁၀ မိုင်ကျော်အကွာလောက်ထိ ချဉ်းကပ်လာနေပြီး တိုက်ပွဲတွေဟာ တရက်ကို အနည်းဆုံး ၄ ကြိမ်ကနေ ၈ ကြိမ် အထိ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဟာ အရင်လထက် စာရင် ၂ ဆလောက်အထိ မြင့်တက်လာနေတာ ဖြစ်ပြီး အစိုးရစစ်တပ်ဘက်က မကြာခင်မှာ အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့
လိုင်ဇာကို ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း KIOက သုံးသပ်ထားပါတယ်။ လတ်တလော ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကို ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာတော့ အစိုးရစစ်တပ်တွေဟာ လိုင်ဇာမြို့က ၁၀မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် နမ့်ဆန်ယန် ကျေးရွာအနီးထိ ရောက်လာနေပြီလို့ KIO ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်က ပြောပါတယ်။
မြစ်ကြီးနား လိုင်ဇာ ကားလမ်းဘေးက နမ့်ဆန်ယန်ရွာ အစိုးရတပ်အင်အား ၂၀၀ ကျော် တပ်စွဲထားသလို ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ရွှေညောင်ပင်အနီးက ရှုခင်းသာတောင်ကုန်းကို အစိုးရတပ်က ၅ ရက်ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ ဦးလနန်က ပြောပါတယ်။
အစိုးရတပ်ဘက်က လက်ရှိတိုက်ခိုက်နေတာဟာ လိုင်ဇာကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်း ရှင်းလင်းရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး ဒီလမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရင် မြစ်ကြီးနားကတပ်တွေ လိုင်ဇာဘက်ကို ၀င်လာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဦးလနန်က သုံးသပ်ပါတယ်။
“အခုတိုက်ပွဲဝင်နေတာ လမ်းကြောင်းရှင်းလင်းရေးပေါ့။ လမ်းကြောင်းပွင့်သွားပြီဆိုရင် နောက်တန်းက နေပြီး တော့ စစ်ကြောင်းက တောက်လျောက် ဆက်လိုက်မှာ။ တံတားကျိုးတဲ့နေရာမှာ မြေတူးစက်တွေ မြေကော်စက်တွေနဲ့ဖို့ပြီးတော့ ဒါမှမဟုတ်ရင် သံဘောင်တွေချပြီးတော့ ဖြတ်မယ်။ သံချပ်ကာ ကားတွေပေ့ါနော်။ အဲလို အမြောက်တင်ယာဉ်တွေဖြတ်ဖို့ အစီအစဉ်လုပ်နေကြတယ်”
တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အခုလို တိုက်ပွဲတွေ အရှိန်မြင့်တက်လာချိန်မှာ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နယ်စပ်ဒေသဘက်ကို ထောင်နဲ့ချီတဲ့
တရုတ်စစ်သားတွေကို စေလွှတ်ထားတယ်လို့ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်က ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
KIAနဲ့ မြန်မာအစိုးရအကြား ဒီနှစ် ဇွန်လက စတင်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့် ကချင်စစ်ပြေးဒုကသည် ၂ သောင်း လောက်ဟာ လိုင်ဇာမြို့အပါအ၀င် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသဘက်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေကြရပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေက လိုင်ဇာကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒုကသည်တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘက်ကို ထပ်မံတိမ်းရှောင်ရမယ့် အခြေအနေရှိနေပါတယ်။
မင်းကိုနိုင် မွေးနေ့ပွဲမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း (ရုပ်/သံ)
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရဲ့ ၄၉ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရဲ့ ၄၉ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ကို အင်းစိန်မြို့ နယ် သမိုင်းမြို့မ ပရိယတ္တိစာသင် တိုက် မှာ အောက်တိုဘာ လ ၁၈ ရက်နေ့ မနက်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် လတ်တလော အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာလာတဲ့ ကိုဇာဂနာ၊ မစုစုနွေးနဲ့ အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေ နဲ့ ပရိတ်သတ် ထောင်ချီ ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ (burma vj media)
Photo...Mae Khaung/burma vj media
10/18/2011 02:27:00 PM
မင်းကိုနိုင် မွေးနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် (သတင်း/ဓါတ်ပုံ)
ယနေ့ ၁၈ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ တနင်္လာနေ့ မနက် ၈ နာရီက ကျိုင်းတုံထောင်တွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်း ကျခံနေရသော ကိုမင်းကိုနိုင် (၄၉)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အခမ်းအနားအား သမိုင်းမြို့မကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တကွ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဘဘဦးတင်ဦး၊ ဘဘဦးဝင်းတင် နှင့် အကြီးအကဲများ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား/သူ များ၊ ဂီတအနု ပညာရှင်များ၊မကြာသေးခင်ကမှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရာမှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ သော စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ကိုသူရ (ခေါ်) ကိုဇာဂနာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ဒီမိုကရေစီအရေးကို လိုလားကြသူများနှင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်းမှာရှိကြသော ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သားများ စုံစုံ ညီညီတတ်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက် စာတမ်း
ABSL Paper Bur-outside
10/18/2011 01:45:00 PM
ABSL's position paper on curent situation in Burma (Myanmar)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ထပ်လွှတ်ပေးဖို့ အမတ်ဦးသိန်းညွန့် ကြားဖြတ်အဆိုတင်သွင်း
အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် အကျဉ်းသားများနှင့် အခြားအကျဉ်းသားများကို ထပ်မံလွှတ်ပေးရန် ပြည်သူလွှတ်တော်ထံ အဆိုတင်သွင်း၊ ကျန်ရှိနေသေးသည့် အကျဉ်းကျခံသူများအား အချိန်ကာလနှင့် အခြေအနေပေါ် မူတည်ကာ ဖြစ်နိုင်သမျှ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးသွားရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သူရဦးရွှေမန်း ပြန်လည်ဖြေကြား
အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် အကျဉ်းသားများနှင့် အခြားအကျဉ်းသားများကို ထပ်မံလွှတ်ပေးရန် ပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်မှ ကြားဖြတ်အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။အဆိုပါအဆိုကို ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေး ၃၅ ရက်မြောက်နေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်မှ "အာက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုဖို့ အမိန့်ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအပြင် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကော်မတီ ထောက်ခံချက်ကိုပါ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပေးဖို့ အဆိုတင်သွင်းလိုပါတယ်။ နောက်အဆိုတစ်ခုက အမျိုးသားအင်အားစုများ တည်ဆောက်နေချိန်မှာ အကျဉ်းထောင်အတွင်းကျန်ရှိနေတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ အကျဉ်းသားတွေနဲ့ ကျန်အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေးကို အလေးထား စဉ်းစားပေးပါရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် မှတဆင့် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဒီအဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီး အနေနဲ့လည်း ခံစားမှုများဖြင့် လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါ အဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက "အခု နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာ ဦးသိန်းညွန့်တင်ပြသလိုပဲ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကော်မတီရဲ့ ထောက်ခံချက်နဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့သလို အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က တင်သွင်းတဲ့ အဆိုပြုချက်အပေါ် မူတည်ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိရသလောက် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကော်မတီမှာရော၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှာရော ဦးသိန်းညွန့် ပထမတင်ပြထားတဲ့ အဆိုအတိုင်း အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ အကျဉ်းကျခံသူများအား အချိန်ကာလနှင့် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးဖို့ရှိတဲ့အတွက် ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆိုကို သီးခြားဖော်ပြဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ စေတနာ၊ အစိုးရစေတနာ၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကော်မတီရဲ့ စေတနာတွေကို ကျော်လွန်ဆောင်ရွက်တဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ဒီအစီအစဉ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိခြင်းအားဖြင့် ဦးသိန်းညွန့် တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ပထမအဆိုကို မှတ်တမ်းတင်သွားဖို့ရှိပြီး ကျန်အဆိုဖြစ်တဲ့ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အကျဉ်းသားများအား အကျဉ်းထောင်မှ လွှတ်ပေးရေး သမ္မတကြီးထံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှတဆင့် မေတ္တာရပ်ခံပါသည် ဟူသည့် အဆိုကို တင်သွင်းရန်မသင့်သေးကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့်အမှတ် ၄၉/၂၀၁၁ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်မှုအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ လှိုက်လှဲဝမ်းမြောက် ကြိုဆိုပါကြောင်း အဆိုအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်းထောင် ၄၂ ခုနှင့် အလုပ်စခန်း ၁၀၉ခု ရှိ အကျဉ်းသားများအနက်မှ နေသား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိ စုစုပေါင်းအကျဉ်းသား ၆၃၅၉ ဦးကို စိစစ်ကာ အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက်နေ့က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယခုကဲ့သို့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များကို ခြောက်လအတွင်း နှစ်ကြိမ် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အမိန့်ဖြင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
10/18/2011 12:34:00 PM
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၉ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် (ရုပ်သံ)
မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အမေရိကန် မေးခွန်းထုတ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက နိုင်ငံတကာကို ပြောနေပေမယ့် တကယ် စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေတယ်လို့ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချယ်လ်က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌါနမှာ မနေ့က သီးသန့် ကျင်းပခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူး ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် သမ္မတ အိုဘားမား အဆိုပြုထားသော အာရှနဲ့ ပစိဖိတ် ရေးရာ ဒုတိယ လက်ထောက် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး Derek Mitchell ဖြစ်ပါသည်။
ပိုပြီး ပွင့်လင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်တဲ့ အပြု သဘောဆောင် တိုးတက်မှုတွေကို မြန်မာ အစိုးရဘက်က ပိုပြီး လုပ်ပြလာတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အမေရိကန် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ သံသယတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေခံ ပြောင်းလဲမှု တချို့ကို တကယ်ပဲ မြင်တွေ့ရတာ မှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့ သံသယပါပဲ။ မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်း အစစ်အမှန်ပေါ်ကို တကယ်ပဲ ရောက်နေပြီလား ဆိုတာ အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ မေးခွန်း ထုတ်မိပါတယ်လို့ ဒဲရက်ခ် မစ်ချယ်လ်က ပြောသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အပေါ် ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ထွက်ပေါ်နေဆဲပဲလို့လည်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုပြီး မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စုစုပေါင်း ၂၀၀၀ နီးပါးထဲက နှစ်ရာကျော်လောက် မကြာသေးခင်က လွတ်မြောက်လာတာ၊ တရုပ်နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို မြန်မာ အစိုးရဘက်က ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာ စတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ အဖြစ် ဒဲရက်ခ် မစ်ချယ်လ်က ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့လက သူ့ရဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ် အတွင်း သာမက နယူးယောက်မြို့မှာ မြန်မာအစိုးရ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဒဲရက်ခ် မစ်ချယ်လ်က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တိုက်ရိုက်ခန့်စနစ် ကို ပြန်လည်းသုံးသပ်မယ်
ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ဗဟိုမှ တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်တဲ့စံနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဥပဒေမူကြမ်းကော်မီတီက ပြန်လှန်သုံးသပ်ဖို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ခေါင်းဆောင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်က သူ့အနေနဲ့ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို မဲဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့ တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးက ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒီဥပဒေကြမ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့် တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လူထုဆန္ဒမဲနဲ့ ရွေးချယ်ဖို့ အဆိုကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးကိုကိုက လက်မခံပဲ ဆန့်ကျင်ဘက် အဆို တင်သွင်းပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ် ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အခု ဒီအဆိုကို အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မီတီက ပြန်လည် စိစစ်ပြီး အမျိုးသား လွှတ်တော်ကို ပြန်လည် တင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သဘောမတူညီခဲ့ရင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရဲ့ ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်း ကော်မီတီကို တင်ပြရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးရမှာပါ။
5th year Anniversary of fallen student leader ThetWinAung
BG သွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့၏ ကိုမင်းကိုနိုင် (၄၉နှစ်ပြည့်) မွေးနေ့အကြို အခမ်းအနား
10/18/2011 10:27:00 AM
“ကောင်းကင်ပေါ်တွင်ဈာန်ကြွ နေသောရဟန္တာ” ဟူသည့်ခေါင်း စဉ်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင် အားချက်ချင်း ပင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရူ လိုက် ချိန်တွင် ယင်းနေရာ ဒေသရှိ ဖူးမြော်သူတို့၏ အသံများနှင့် အတူ မြစ်ပြင် အထက်
အတော်ခပ်လှမ်းလှမ်း ရှိရဟန္တာ ကိုယ်တော်မြတ် ဈာန်ဖြင့် ကြွနေသည် ကိုလွန်စွာ ဝေးကွာနေခြင်း ကြောင့် မသဲမကွဲ အနေအထားဖြင့် ဖူးတွေ့ လိုက်ရပါသည်။ ဗီဒီယိုရိုက် ကူးနေသူအား မြင်ရပါ့ မလားဟု မေးမြန်းသော အသံနှင့်မြင်ရတယ် ဒီမှာလေ ဟူသော အသံကိုစတင် ကြားလိုက်ရသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင် အား စတင် share ပေးပို့သော ဆရာမြင့်မောင် ကျော်ထံဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း ရာတွင် “မူရင်း တင်ထားတဲ့သူက တော့ အာသာ မင်းပါ။ ဆရာလည်း သူ့ကို ဆက်သွယ်ဖို့ လုပ်နေတာ မရ သေးဘူး။ ဘယ်နေရာမှာ၊ ဘယ် အချိန်လဲ ဆိုတာ ဆရာလဲ မေးမလို့ ဆက်သွယ် ထားတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆရာလည်း ဒီလိုမျိုးကောင်းကင်မှာ ဈာန်နဲ့ကြွသွားတဲ့ ရဟန္တာတွေကို မကြာခဏ ဖူးတွေ့ရဖူးတယ်။ ပြော ရရင် တော့ကွာ ဒီဗီဒီယိုဖိုင် ကို ဆရာ ကိုယ်တိုင် လည်း
ယုံကြည် လို့တင် ထားတာ။ share လုပ်ပေးတာပေါ့ ကွာ”ဟု မြန်မာပို့စ်သတင်းဂျာနယ် ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် ကို ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အားယုံကြည်သက် ၀င်သူလူငယ် တစ်ဦးကလည်း “ကျွန် တော် ရဟန္တာ တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဖူးမြော်ခွင့် မရပေ မယ့်လည်း ရှိတယ် ဆိုတာကို တကယ် ယုံကြည်ပါတယ်။ တောင်တန်းသာ သနာပြု ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟော ကြားသွားတဲ့ တရားတစ်ပုဒ်မှာ ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည် မှာ ရဟန္တာ တွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ ကိုလာတဲ့ လေယာဉ်မှူး တွေဆိုရင် ကောင်း ကင်မှာ ဈာန်နဲ့ကြွနေတဲ့ ရဟန္တာတွေ လေယာဉ် ဘေးမှာ၊ တချို့က လေယာဉ်ပျံရဲ့ ရှေ့မှာ အုပ်စု လိုက် ရော၊ တစ်ပါးချင်း ရော ဈာန်နဲ့ကြွနေ ကြတာ ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလို့
အရမ်းကို အထူး အဆန်းဖြစ်ရလို့ မေးမြန်း လျှောက် ထားကြတဲ့ အကြောင်းကို တောင် ထည့်သွင်း မိန့်ကြား သွားတာ ကိုတရားနာခဲ့ ရဖူးပါတယ်။ အခုဗီဒီ ယိုဖိုင်မှာ ဖူးတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရ အောင်ရိုက် ကူးပေးခဲ့တဲ့ သူကို အထူး ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင် မှာ ဖူးတွေ့ရတာလဲ အရမ်း အံ့သြသလို၊ အရမ်းလည်း ယုံကြည်မိပါတယ်” ဟု မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ်၏သဘော ထားအမြင် တောင်းခံမှုအပေါ် ပြန် လည်ဖြေကြားပေးခဲ့သည်။
10/17/2011 11:41:00 PM
အာရပ်ကမ္ဘာက လူထုလှုပ်ရှားမှုလိုမျိုး မြန်မာပြည်မှာ မလိုအပ်သေးဘူးလို့ မကြာခင်က ထောင်ကနေ
လွတ်မြောက်လာတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာက ပြောပါတယ်။
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အာရပ်နွေဦးလို့ လူသိများတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်း သိခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ ကိုဇာဂနာက ပြောပါတယ်။
ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ပြောနေကြတာပေါ့။ သို့သော် ကဒါဖီလည်း မမိသေးဘူး။ ဘယ်နားရောက်နေလဲ မသိဘူးပေါ့။ ဒါတွေကတော့ ကျနော်တို့ ဖတ်နေရတာပဲလေ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲနေတာတော့ တွေ့တာပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲတယ်လို့ ပြောလို့မရသေးတဲ့ မပြီးသေးတဲ့ မြစ်ဆုံကြီးကတော့ ရပ်သွားသည်ဟု ဆိုသည်ပေါ့။ အဲဒါလောက်တော့ တွေ့ပါတယ်။”
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ မြန်မာပြည်အတွက် အဖြေ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မကြာခင်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းရေဘေးသင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကို အကူအညီ တောင်းခံနိုင်
ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာအလုပ်သမား ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေဟာ ထိုင်း ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဌာနတွေဆီ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြား နိုင်တယ်လို့ မြန်မာရေဘေးဒုက္ခသည်အရေး တာဝန်ခံက ပြောပါတယ်။
စီးဆင်းလာတဲ့ ရေထုကြောင့် ဘန်ကောက်မြို့ အထက်က နခွန်စ၀မ်၊ အယုဒ္ဓယနဲ့ ပထုံဌာနီဒေသတို့မှာ ခရိုင်တခုလုံး ရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နေပြီး ရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်းအစိုးရက
ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဘန်ကောက် ဒွန်မောင်း လေဆိပ်က အရေးပေါ် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစင်တာကို ဆက်သွယ်နိုင် ပါတယ်လို့ တာဝန်ခံက ပြောပါတယ်။
သိပ်မများသေးဘူး။ မြန်မာအလုပ်သမားတွေက စင်တာရဲ့​ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမသိသေးဘူး။ ကျမတို့ စင်တာက ခုမှ စဖွင့်တာလည်း ပါတယ်လေ။ သူတို့ကို ပြောပြပါ။ စင်တာကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်။ သူတို့ ရှိနေတဲ့ နေရာတွေနဲ့ သိမြင်နိုင်တဲ့အမှတ်အသားတွေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို တိတိကျကျ ပြောပြစေချင်တယ်။ သွားပြီးကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေက အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ဖို့ပေါ့။”
ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ၀၈၅ ၃၃၂၇၅၅၃ ဖြစ်ပြီး အမည်က ‘ဖိနုတ်’ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းစကားမပြောနိုင်တဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက် ၀၈၅-၃၇၀၀၅၉၆၊ ၀၈၀-၅၅၂၂၀၆၂၊ ၀၈၉-၆၃၇၅၂၇၁ စတဲ့ ဖုန်းနံပါကို ဆက်သွယ်ပြီး မြန်မာစကားပြန်တွေကို အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်းစကားတတ်တဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးကို အရေးပေါ်ဖုန်းနံပတ် ၁၁၁၁ ကနေ ၂၄ နာရီပတ်လုံး အခမဲ့ တိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားနိုင်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး တာဝန်ခံတဦးက ပြောပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားဆိုရင် ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားပါ။ အမည်နဲ့ ပြန်ပြီးဆက်သွယ်လို့ ရတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြောပါ။ ပြီးတော့ မိမိ ရေဘေးဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ ခရိုင်အမည်တွေကို အကူအညီတောင်းခံမယ်။ ဥပမာ သဲအိတ်လိုလား၊ ဆေးဝါးလား၊ အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင် စသဖြင့်ပေါ့။ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ အနီးဆုံးဌာန အမှုထမ်းတွေကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကျမတို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ခရီးသွားလာရာမှာ ဘယ်လမ်းတွေကို
ရှောင်ပြီး ဘယ်လမ်းတွေကနေ သွားရမယ်ဆိုတာကို သိဖို့ ဖုန်းနံပါတ် ၁၄၉၀ ကို ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ အရေးပေါ်ဆေးကုသရေး လိုအပ်ရင် အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးဌာန ဖုန်းနံပါတ် ၁၆၆၉ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။”
၂ လကြာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူ ၃၀၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဘန်ကောက် အထက်က နခွန်စ၀မ် အယုဒ္ဓယနဲ့ ပထုံဌာနီ စတဲ့ခရိုင်တို့မှာ အိမ်ခြေ ၃ သန်းနီးပါး ရေမြုပ်ပြီး လူဦးရေ ၈ သန်းခွဲကျော် ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။
နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်စပ်နေတဲ့ ဘန်ကောက်အနောက်ဘက်က ရပ်ကွက်ဇုန် ၁၅ ခုကို ရေမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ထိုင်းအစိုးရက ကြေညာထားပေမယ့် ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝန်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း အဘီဆစ်ကတော့ အစိုးရက ရေမလွှမ်းဘူးလို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ ခရိုင်တွေမှာ ရေလွှမ်းသွားတာကြောင့် ခုကြေညာချက်ကို ရာနှုန်းပြည့် စိတ်မချဘူးသေးဘူးလို့ မီဒီယာတွေကို ပြောပါတယ်။
10/17/2011 11:36:00 PM
သိပ်ကပ်စေး မနှဲပါနဲ့၊ သမ္မတကြီး ထပ်လွှတ်ပေး ပါဦး
လူမြင်ကွင်းမှ ကာလအတန် ကြာ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ သူတစ်ဦး သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့မှာ ထွက် ပေါ်လာ ပါတယ်။ သူကတော့ သူ့ဘ၀ သက်တမ်း တစ်လျောက်မှာ ထောင် လေးကြိမ်ကျဖူးတဲ့ အနုပညာရှင် ဦးသူရ (ခ) ဇာဂနာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရ ရာမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် ဇာဂနာနဲ့ အင်တာဗျူးဖို့ သူ့ရဲ့နေအိမ်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာရှင်ဇာဂနာ က ထောင်ကနေ ထွက်လာပြီး နောက် ပိုင်းမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ပျော် ရွင်မှု မရှိဘူး လို့ စဆိုပါတယ်။ သူနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ တော့ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေ၊ အပြင် ကိုပြန်ရောက် လာတဲ့ အချိန်မှာသူ့ရဲ့ လတ်တလော လှုပ်ရှားမှုစတာတွေ ကို မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ်က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပို့စ် – ထောင်က ထွက်လာတဲ့အချိန် မှာ ဘယ်လိုများခံစားရပါသလဲ။
ဇာဂနာ – ဒီလိုဗျ၊ ကျွန်တော် ထောင်ကျတာ လေးခါဖြစ်နေပြီ။ တကယ်တော့ ထောင်ကနေထွက်ရ တာပျော်စရာပါ။ တကယ်လည်း ပျော်သင့် ပါတယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီနေ့ ကမပျော်နိုင်ပါဘူး။ မပျော်နိုင်ရခြင်း ကလည်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ ထောင်ထဲမှာ အများကြီးရှိတယ်။ မြစ်ကြီးနား ထောင်မှာကျွန်တော် အပါအ၀င် လွတ်လာ
တာကသုံး ယောက်၊ ကျန်ခဲ့တာ ၁၄ ယောက်၊ တစ်နိုင်ငံ လုံး အတိုင်း အတာနဲ့ ဆိုရင် —–။ အဲဒီ လူတွေ မလွတ်သေးမျှ ကျွန်တော် မပျော်နိုင်ဘူး။ ကျွန် တော် လွတ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး ဖုန်းဆက် နေတာ။ဘယ်သူတွေ လွတ် လဲဆိုတာကိုပေါ့။ ဒါကြောင့် ပျော် ချင်တယ်။ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ မလွတ်ကြသေး တဲ့အတွက် မပျော်
မြန်မာပို့စ် – ကျန်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေ အတွက်အပြင်မှာ ဘာများလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲ။
ဇာဂနာ- နံပါတ်တစ် ကတော့ သူတို့အကုန်ပြန်လွတ်မယ်လို့ ယုံ ကြည်ပါတယ်။ နှစ်
အချက်ကတော့ သူတို့ပြန်လွတ် ဖို့လည်း လုံခြုံရေး ကောင်စီ၊ သမ္မတကြီး အပါအ၀င်
ပေါ့။ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးနဲ့
ရင်ကြားစေ့ရေး အတွက် လုပ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာဒီလိုလူမျိုး တွေရှိ နေကြတော့ ဘယ်လိုလုပ် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တွေလုပ် နိုင်မှာလဲ။ အဲဒီအတွက် ကြောင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့် မြတ်ရေး အတွက် ဒီလိုလူမျိုးတွေ ထောင်ထဲမှာ ရှိမနေသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုလူမျိုးတင် မဟုတ်ဘူးနော်။ ဗိုလ် ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်တို့လို၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စန်းပွင့် တို့လိုလူမျိုးတွေလည်း မရှိ သင့်ဘူး။ မြစ်ကြီးနား မှာဆိုရင် ဗိုလ် မှူးကြီး ထွန်းလှအောင် တို့လို ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အကျဉ်း သား အားလုံးအတွက် ပြောနေတာ။ ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူး။ ကျွန်တော် အသက်နဲ့ ထပ်ပြီးအာမခံ နိုင်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြဖို့ လုံးဝ မရှိပါဘူး။ ဒီကိစ္စက လမ်းပေါ်မှာ လုပ်ရမယ့် အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာပို့စ် – အကျဉ်းသား တွေ လွတ်ပေး တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲဒီအပေါ်မှာ ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဇာဂနာ – ဒါက ပဏာမ အနေ နဲ့ လုပ်တာ လို့မြင်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အ ခေါက်ကတစ်နှစ်လျှော့တယ်ဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ အခုဒီတစ်ခေါက် ကျတော့ မတူဘူး။
လွတ်လာတဲ့ သူ စာရင်း အတိအကျကို တော့မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်းပါတယ်။သို့သော် မလုံ လောက်သေးပါဘူး။ လွတ်လာ တဲ့ဟာကို လည်းဝမ်းသာပါတယ်။သို့ သော်သိပ်ကပ်စေး မနဲပါနဲ့။သမ္မတ ကြီးထပ်လွှတ်ပြီးဦး။ ကျွန်တော်ပြော ချင်တာ က Free All အားလုံးကို လွတ်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အကုန် လွှတ်ရင်တော့ အတိုင်းအထက် အလွန်ပေ့ါ။
မြန်မာပို့စ် – ရှေ့က လည်းသုံးကြိမ် လောက်ထောင် ကျဖူးတယ်။ အခုနောက်ဆုံးကျ တဲ့အနေအထားမှာ အရင်က ထောင်ကျ တာနဲ့ အထဲမှာနေရထိုင်ရတာ ကွာခြားမှုရှိလား။
ဇာဂနာ – အနေအထားက တော့တော်တော်ပြောင်းသွားပြီ။ အ ရင်ကထက်အများကြီးတိုးတက်သွား ပြီ။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မတိုင်ခင်က ထောင် ထဲမှာ မြေကြီးပေါ်လမ်းလျှောက် ခွင့်မရှိဘူး။ အခုမြေကြီးပေါ်မှာတစ် နေ့ ၁၂ နာရီ လမ်းလျှောက် လို့ရ တယ်။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီအချိန် တုန်းက ထောင်ထဲမှာ ဘာစာမှဖတ် ခွင့်မရှိဘူး။ နောက်အိမ်သာ တက်ပြီး ရင်သုံးဖို့ အတွက် စက္ကူတောင် မရှိ ဘူး။ သစ်ရွက် တွေသုံးရတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် အိမ်က ပို့ပေးတဲ့ အ၀တ် တွေကို ကတ်ကြေးနဲ့ အပိုင်းလေး တွေဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးသုံးရတယ်။ အခုတော့ သီတင်းစာ ဖတ်လို့ရတယ်။ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းဖတ် လို့ရတယ်။ အင်္ဂ လိပ် စာအုပ်တွေ လည်းဖတ်လို့ရတယ်။ နောက်ဆုံး NewsWeek ကအစ ဖတ်လို့ရတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သိသိသာသာ ဘာ ပြောင်းလဲလာ လည်းဆိုတော့ အဲဒီတုန်း ကဘယ်လို မှတောင် စိတ်ကူးယဉ်
လို့မရတဲ့ တီဗီ ကြည့်ရ တယ်။ နောက်ပြီး FM မှာ ပတ္တမြား FM နားထောင်လို့ ရတယ်။ အဲဒီဟာ တွေကိုက တော်တော်ကွာ နေပါပြီ။ ဒါက စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရ အမြတ်ယူ မယ်ဆိုရင် ယူလို့ရနေပြီ။ အခုဆိုရင် SAT တို့၊ TOEFL တို့ လေ့လာ သင်ယူနေတဲ့သူတွေ တောင် အများကြီး ရှိလာပြီ။ အဲဒီလောက် အထိ ကျွန်တော်တို့ ထောင်ထဲမှာကြိုး စားလို့ ရနေပြီ။ ဒီလိုပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့အချိန် တွေကိုပြော ရမယ်ဆိုရင် အကုန်လုံး အရင်က နဲ့မတူတော့ဘူး။ တိုးတက် ပြောင်းလဲ လာတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး တိုး တက်ပြောင်း လဲလာဖို့လည်းမျှော်လင့် တယ်။
မြန်မာပို့စ် – လွတ်လာပြီ နောက်ပိုင်း ဒီနှစ်ရက် တာကာလအတွင်း အပြင်လောက ဘယ်လို ပြောင်းလဲလာတာ ကိုတွေ့ရပါသလဲ။
ဇာဂနာ – အခုလတ်တလော နှစ်ရက်ပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့ အပြင် မထွက်ဖြစ်သေးဘူး ဆိုတော့အခြေ အနေ ဘယ်လိုရှိမလဲ မသိသေးဘူး။ ကျွန်တော်ထောင်ထဲ မ၀င်ခင်အချိန် တုန်းက Facebook ဆိုတာသုံးလို့ ရပြီ။ အခုမနက်တင်ပဲ ကျွန်တော် အင်တာနက် ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့် အိမ်က ADSL တပ်ထား တော့ DVB တို့၊ VOA တို့ကသတင်း တွေကြည့် လို့ရနေပြီ။ အရင်က အဲ ဒါတွေကြည့် လို့မရခဲ့ဘူး။ ဒါတွေကို အရင်က ဘန်း(အလွယ် တကူဝင် ကြည့်မရအောင် ပိတ်ဆို့ ထားခြင်း) လုပ်ထားတာလေ။ အဲဒါလေးတွေ ပြောင်းလဲ လာတာကိုတော့ လတ်တ လောတွေ့တယ်။
မြန်မာပို့စ် – လွတ်မယ်လို့ ဘယ်အချိန်မှာ စသိခဲ့လဲ။
ဇာဂနာ – လပြည့်နေ့ နံနက် ၅ နာရီခွဲ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ထောင်ကျ ရုံးတာဝန်ခံက
အစ်ကိုလွတ်ပါတယ် လို့လာ ပြောတယ်။ ဟုတ်ရောဟုတ် ရဲ့လားလို့ပြန မေးရသေးတယ်။ ညွှန် မှူးက ၀မ်းသာကြောင်းပြောချင်လို့ ထွက်ခဲ့ပါဦး ဆိုလို့ ဘောင်းဘီတိုနဲ့
ရောက် သွားတယ်။ ကျွန်တော်က လည်းအကုန် လွတ်တယ်ထင် လို့ညွှန် မှူးက မဟုတ်ဘူး။
အကုန်လွတ်တာ မဟုတ်ဘူး လည်းဆိုရော ဒီမှာ Feel ငုပ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစား လဲပြီး တခြားကျန်တဲ့ အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင် ဘာမှ မယူဘဲ
ကျွန်တော့်စာအုပ် တွေပဲယူ ပြီး ထွက်လာခဲ့တာပါ။
မြန်မာပို့စ် – နောက်ပြီးတော့ သီးလေး သီးအဖွဲ့ ၂၉ ရက်နေ့ ကန်တော်ကြီးမှာ
ပြန်လည် ကပြ ဖျော်ဖြေမယ်ဆို တော့ ဦးအနေနဲ့ အဲဒီမှာ ရော ပါဝင်ကပြဖျော်ဖြေပေးဖို့ရှိလား။
ဇာဂနာ – မဖျော်ဖြေပါဘူး။ မ ဖျော်ဖြေဘူး ဆိုတာက ကျွန်တော် ဒီ မှာ သီးလေးသီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီ ရောက်နေ တာ နှစ်သီးပေါ့။ အဲဒီ အထဲမှာ ဂေါ်ဇီလာ ကိုလည်းခေါ်ပြီး တွေ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လူ စုံပြီးမှ ကစေချင်တယ်။ ကျွန်တော် တားလို့ မရဘူးလို့ သူတို့ဟာ သူတို့ ကမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်အ နေနဲ့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ သို့ပေ မယ့် မူလ သီးလေးသီးတော့ မတပ် ပါနဲ့။ လေးသီး မရှိဘဲ နှစ်သီးပဲ ရှိတယ် ဆိုတော့ အဲဒါ သူတို့ကို ပြောထား တယ်။ နောက်ပြီး မြပုဏ္ဏမာ ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုလည်း မသုံးပါနဲ့။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မြပုဏ္ဏမာ က သူတို့နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလေ။ မြပုဏ္ဏမာ ဆို တာက ဇာဂနာ၊ အရိုင်း၊ ကင်း ကောင်၊ ဖိုးဖြူ၊ ငှက်ပျော်ကြော်၊ ညောင်ညောင် တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ လေ။
ဒီလူတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ ကျွန် တော့် နာမည်လည်း မထည့်ပါနဲ့ လို့ ပြောထားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ ဒီပွဲကို ကျွန်တော်လုပ်တာ လည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် လုပ် တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော့်နာမည် သုံးတာမျိုး တော့မဖြစ်ချင်ဘူး။
မြန်မာပို့စ် – သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် တွေအနေနဲ့ အနုပညာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိတ်ပင် တာတွေ ဘာတွေ ရောရှိလား။
ဇာဂနာ – အခုထိ ဘာမှ မပြော သေးဘူး။ ကျွန်တော့်ကို ထောင်ကစ ပြီး ထွက်လာကတည်းက သူတို့ကိုယ် တိုင်ပဲ ဒီအိမ်ပေါ်ေ ရာက်တဲ့အထိ လိုက်ပို့ သွားတာပဲ။ ကျွန်တော့်ကို ဘာ မလုပ်ပါနဲ့။ ညာမလုပ်ပါနဲ့လို့ တားမြစ် ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ကျွန် တော်ထင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပုံရ ပါတယ်။
မြန်မာပို့စ် – မြပုဏ္ဏမာ အနေနဲ့ ထပ်ပြီး တော့ အငြိမ့်ကပြဖျော်ဖြေဖို့ရှိပါသလား။
ဇာဂနာ – လတ်တလော ပြော ရမယ်ဆိုရင်တော့ မရှိဘူးလို့ဘဲ ပြော ရမယ်။ အရင် လူဟောင်းတွေက အ ခုထက်ထိ အတူပဲ။ ကိုအရိုင်း၊ မောင် မေတ္တာ၊ ကိုငှက်ပျောကြော်၊ ကင်း ကောင်တို့ နေ့တိုင်း ကျွန်တော့်အိမ် ကိုလာကြ ပါတယ်။
ဒီလူတွေကအခု မှမဟုတ်ဘူး။ ထောင်ထဲ မရောက်ခင် ကတုန်းကလည်း အတူတူ။ ထောင် ထဲ ရောက်ပြီးတော့လည်း အတူတူပဲ။ ဘာဖြစ်လို့မကဖြစ်တာလဲ ဆိုတော့ မင်းသမီးက ပွင့်လောက ဖြစ်နေပြီ။ တခြားမင်းသမီးအစား ထိုးလိုက်ရင် မြပုဏ္ဏမာ မဟုတ်တော့ ဘူးလေ။ ဒီသဘောပါ။ နောက်ထပ် စိတ်မ ကောင်းစရာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ဝင် လူရွှင်တော်ဖြစ်တဲ့ ကိုဖိုးဖြူ က အခုအချိန်မှာ ကျန်းမာရေး တော်တော် ချွတ်ယွင်းနေပြီး အိပ်ရာ ထဲမှာ လဲနေတယ်။ လမ်းတောင်မ လျှောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေဲ့ မြပုဏ္ဏမာဆို တာက ပိုမသင့်တော်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ကိုဖိုးဖြူအနေနဲ့ လည်း သူမပါဝင်ရ တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မယ်။ နောက်ထပ်က သူအိပ်ရာ ထဲလဲနေ တဲ့အတွက် သူ့ကိုတော့ ဖယ်ထား လိုက်ပြီဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဝင်သွားမှာ ကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မလိုလား ပါဘူး။ အဲဒီ အတွက် ကျွန်တော်တို့ မြပုဏ္ဏမာ အနေနဲ့ ကဖို့မဖြစ်နိုင်သေး ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် တခြား ဖျော်ဖြေ မှုပုံစံတွေနဲ့ ပရိသတ် ကိုဖျော်ဖြေသွား မှာပါ။
မြန်မာပို့စ် – အရင်တုန်း ကလိုပဲ ပြည် သူ အကျိုးပြုပြက်လုံး တွေနဲ့ ဆက်လက်ဖျော်ဖြေ သွားဖို့ ကောရှိပါသလား။
ဇာဂနာ – ပျက်လုံးနဲ့ သရော် တယ်ဆိုတာကလည်း အချိန်တိုင်း အလကား သရော်လို့ရတာ မဟုတ် ဘူးလေ။ တကယ်သရော်ဖို့ အကြောင်း ရှိလာမှ၊ ကမောက် ကမဖြစ်ရပ်တစ် ခုခုက ရှိမှ ပြောလို့ရမှာလေ။ အဲဒါ ကြောင့် ဒီလို အနေအထားလေး တွေ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြက်လုံးတွေ က ထွက်လာ တာလေ။ ဒီပြက်လုံး တွေကို တော့ ပြက်ဦးမှာပါ။ ကျွန် တော် ကိုယ်တိုင် မပြောဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်ညီ တွေရှိတယ်။ သူတို့ ပါးစပ်ထဲ ကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးကြား ရမှာပါ။
မြန်မာပို့စ် – အသွင်ပြောင်း ထားတဲ့ အစိုး ရသစ်လက်ထက်မှာ ဥပမာ မြစ်ဆုံကိစ္စတွေ၊ အ ကျဉ်းသားတွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်တွေပြုလုပ် ပေးတဲ့အပေါ် ဦးအနေနဲ့အမြင်လေးပြောပေးပါ။
ဇာဂနာ – ကျွန်တော် ထောင်ထဲ မှာ ဒီကိစ္စကိုကြားရတော့ တော်တော် လေးဝမ်းသာပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ထောင်ထဲက လူတွေမှာ လူသတ်သ မားတွေ၊ လူမိုက်တွေ၊ သူခိုးတွေ အစုံပေါ့၊ အများကြီး ရှိတာပဲ။ ကျွန် တော်တို့ မြစ်ကြီးနားထောင်မှာ ဆိုရင် စုစုပေါင်းအကျဉ်းသား ၁,၆၁၇ ဦး ရှိတယ်။ အဲဒီ ၁,၆၁၇ ဦးလုံး အဲဒီ ညနေ ၅ နာရီ မှာ MRTV4က Breaking News ဆိုပြီး ကြေညာ လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ၀ုန်းဆို ထအော်ပြီး ပျော်လိုက်ကြတာ မြစ်ဆုံ ရပ်ပြီဟေး ဆိုပြီး အဲဒီလို အော်ကြတယ်။ ဒါ ကြောင့် သာမန် အရပ်သားတွေတင် မဟုတ်ပြီး။ ထောင်ထဲ ကလူတွေပါ ဒီလို မျှော်လင့်ကြရင် အပြင်လူတွေ ဘယ်လောက်များ ပျော်ကြလဲဆို တာတွေးကြည့် လို့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စ ဆိုရင် အစိုးရ အနေနဲ့ ကောင်းပါ တယ်။ ကောင်းတာ ကိုကောင်းတယ် လို့ပဲ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ပြောရမှာပါ။ မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့အချက်ကို ကျွန် တော် ပြောပြပါမယ်။ အခုလွှတ်တဲ့ ကိစ္စမှာ ကပ်စေး နှဲပြီး ဒီလောက် နည်းနည်း လေးပဲလွှတ် ပေးတာ။ အ မျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအ တွက်လွှတ် ပေးလိုက်ပါလို့ ပြောချင် တယ်။ ဒီလိုမျိုး ကျတော့ မကောင်း ဘူးလို့ပြောရမှာပဲ။ တစ်ခုက မော် တော်ကား အဟောင်းပယ်ဖျက်ပြီး
ယာဉ် အသစ်တွေ တင်သွင်းတဲ့ကိစ္စ မျိုး ဆိုရင်လည်း တကယ်ကြိုဆိုရ မယ့်ကိစ္စပါ။ ဒီထက်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ ကောင်းတာ တစ်ခုက လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ကျွန်တော် တို့ ဖတ် မရတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဂျာနယ် ထဲ မှာဖတ်ရတယ်။ ဒီလိုစာမျိုးတွေ ဘယ် တုန်းကမှ မဖတ်ခဲ့ရဘူး။ အဲဒီအခြေ အနေ ကိုလည်း နောက်မဆုတ် သွားရ အောင်လုပ်ရမှာက အားလုံးရဲ့တာ ၀န်ပဲ။ သုိ့သော် ဒီထက် ပိုပြီးလွတ် လပ်ခွင့် ရဖို့ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာထုတ် ဝေခွင့်တွေဖြစ်လာစေချင်တယ်။ ဒါ ပေမယ့် အစိုးရမှာ ကောင်းတာတစ် ခုရှိသလို မကောင်းတာ လည်းရှိတာ ပဲ။ ကျွန်တော် တို့က ကောင်းတာကို ကောင်းတယ် လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်သလို မကောင်းတာ ကိုလည်း မကောင်း ဘူးလို့ပြောခွင့်ရှိရမယ်။
မြန်မာပို့စ် – ဦးအနေနဲ့ ခုနပြောသလို အခုအချိန် မှာ ဘယ်လိုပြက် လုံးမျိုးကို ထုတ်ချင် ပါသလဲ။
ဇာဂနာ – အခုအချိန်မှာဘယ်လို ပြက်လုံးမျိုးကိုထုတ်ချင် လဲဆိုရင်လတ် တလောစဉ်းစားထားတာရှိတယ်။ လှေလှော် မယ်ဆိုပါစို့။ နှစ်ယောက် ပေါ့။ မျက်နှာ ချင်းဆိုင်ပြီးလှော်လို့ မရဘူး။ နှစ်ယောက်စလုံး မျက်နှာ ချင်းဆိုင်ပြီး လှော်မယ်ဆိုရင်လှေက ဘယ်ရှေ့ ရောက်မလဲ။ မျက်နှာချင်း ဆိုင်ရင် အလုပ်မှမဖြစ်တာ။ နောက် တစ်ခုက ဘုရင် လုပ်ရမှာပေါ့။ ဟိုး ဘုရင် လက်ထက်တုန်းက
ပုံပြင်တစ် ပုဒ်ရှိတယ်လေ။ ဘုရင်ကို ငါးအကြီး ကြီး လာဆက်တဲ့ သူငယ်ကို တံခါးမှူး ကဘုရင်က ဆုတော် လာဘ်တော် ပေးရင် ငါ့ကို တစ်ဝက်ခွဲ ပေးရမယ် ဆိုပြီးတော့ တောင်းတာ၊ ဘုရင်ကို ဆုလာဘ် အဖြစ် ကျောတစ်ရာ၊ ရင် တစ်ရာ ရိုက်ပါလို့ ပြောပြီး တံခါးမှူး က သူ့ကို တစ်ဝက်ပေးရမယ် လို့ပြော တယ်ဆိုပြီးပြန် လျှောက်တယ်။ အဲဒါ ရှေးတုန်းက ဆိုပေမယ့် အခုဒီမှာ လုပ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့ကိုက်တယ်။ အဲဒါကို ပုံစံအသစ် လေးနဲ့ ပြန်ပျက်ချင် တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့
ငါးလောက် တော့မ ဟုတ်တော့ဘူး။ ကြက်ဆင် လောက် တော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ မြန်မာ မီနီဆလွန်း လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ အဲဒီမှာ ဘုရင်က သိသွားတဲ့ အခါ ခေါ်မေးတာပေါ့။ ခုနတံခါးမှူး ကို အဲဒီမှာ ကျွန်တော်က ယူချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော့် မိန်းမက ယူပါဆို လို့ယူတာပါ လို့ပြောမယ်။ အဲ ဒီအခါမှာ ဘုရင်က အဲဒါဆို မင်းရဲ့ မိန်းမကိုပါဖမ်း မယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော် ဒါမျိုးလေးလည်း စဉ်းစား မိတယ်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုး ကျ တော်စဉ်းစားမိတယ်။
မြန်မာပို့စ် – ပြက်လုံး ထဲမှာ ခုနအကျဉ်း သားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ပြက်လုံး ထုတ်ဖို့စဉ်းစား မိတာများရှိလား။
ဇာဂနာ – အဲဒါကိုတော့ မစဉ်း စားမိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဒီ ကိစ္စက ပြက်လုံး အနေဲ့ ပြက်လို့မရ ဘူး။ ဒီကိစ္စ အတည်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်နေတယ်။
မြန်မာပို့စ် – လက်ရှိမီဒီယာ တွေအပေါ် မှာရော ဦးဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဇာဂနာ – ကျွန်တော်ပြောပါ တယ်။ မီဒီယာတွေအများကြီး တိုး တက်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ကျွန် တော်ပြောခဲ့ သလို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လ လောက်ကစာ တွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင် တဲ့ စာတွေတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုစာမျိုး တွေဖတ်ရ လိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုလွတ်လပ်ခွင့်ရ ဖို့ ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောချင် တယ်။ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာထုတ်ဝေ ခွင့်ကိုပေးသင့်တယ်။
မြန်မာပို့စ် – အခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖြေ ကြားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ တယ်။
ဇာဂနာ – ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။
10/17/2011 11:27:00 PM
သမ္ဘာရင့် နွယ်ချို အသည်းကို ထိခိုက် စေသလား
၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီလပိုင်း ကထုတ်ဝေသော နာမည်ရ ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် နွယ်ချိုကြောင့် အသည်းကို ထိခိုက်သည့် သဘော ရေးသားထား သည်။ မြန်မာ့ဆေးလောက တွင်တော်တော်လေး ကသိက အောက်ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။ တကယ်တော့ နွယ်ချိုသည် မြန်မာ့ဆေးလောက တွင် ဂန္ထ၀င် သမ္ဘာရင့် ကမ္ဘာသုံး ဆေးကောင်း တစ်လက်ဖြစ်၍ ဤအနေအထား ကို တင်ပြထားပါသည်။(စကား ချပ် . . .)
အမှန် တော့ နွယ်ချို၏သမိုင်း သည်ပုဂံခေတ်ဦး ကာလကတည်းက မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ် သည်။ မြန်မာ့ သမိုင်းတွင် အာလူး၊ ငရုတ်သီး၊ ဆေးရွက်ကြီးတို့ထက် မြန် မာပြည်သို့ အရောက်စောခဲ့ဟန်ရှိ သည်။ ဦးချစ်စယာခင်း ထဲရှိကုန်းကြီး တစ်ခုအား (၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ လ) ကတူးဖော်ခဲ့ရာတွင် မြေပုံဘုရား စာများပါရှိသည့် ဆင်းတုတော်များ နှင့် စာပါအပင် စာရင်းများကိုတွေ့ရှိ ခဲ့ကြသည်။ (ဒေါက်တာသန်းထွန်း မှတ်တမ်းမှ)
စားသုံးသီးနှံပင် အမျိုးအစား ၅၃ မျိုးတွင် ဆေးပင် ၂၉ မျိုးပါရှိ ကြောင်း
တွေ့ရှိကြရသည်။ ဤအထဲ တွင် ဆေးဝါး ကဏ္ဍအသုံးပြုသည့် နွယ်ချိုပါရှိလာ၍ ပုဂံခေတ် ကတည်း ကပင် မြန်မာတို့၏ကုခန်းသုံးဆေး ၀ါးအဖြစ် အားကိုး အားထားပြုခဲ့ကြ ကြောင်း ထင်ရှားရုံသာမက ယနေ့ သိပ္ပံခေတ် ကာလတိုင် နာမည်ကျော်
ဆေးကောင်း တစ်လက်အဖြစ်အထင် အရှားရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် အ ခြားသော ခေတ်မီနိုင်ငံကြီးများပင် နွယ်ချိုကို ဆေးဝါးသုံး ပစ္စည်းအဖြစ် သာမက အဖျော်ယမကာ များ၊ အ လှအပသုံးပစ္စည်းများအဖြစ် အသုံး ပြုလျက်ရှိသည်။ နွယ်ချိုနှင့် ပတ် သက်၍စာရေးသူ၏ (ကမ္ဘာ့ဈေး ကွက်ဝင်ဆေးပင်နှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်း များ)အမည်နှင့်ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်နေ သောစာအုပ်တွင် နွယ်ချိုကိုမရှိမ ဖြစ်ဆေးဝါးအဖြစ် ဦးစားပေးရေး သားတင်ဆက်ထားပါသည်။
မြန်မာ့သမိုင်းဦးကာလကတည်း ကထင်ရှားခဲ့သောနွယ်ချိုအားကမ္ဘာ့ စာပေပညာရှင် ဂရိစာရေးဆရာကြီး သီရိုဖရက်စ်တပ်စ်၏ စာအုပ်တွင် လည်းပါရှိခဲ့၍ ရောမစာရေးဆရာ များကလည်း နွယ်ချိုအား (Radix dulcis) အမည်ဖြင့်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ၁၃ ရာစုထိ အီတလီတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း မပြုသေးသော်လည်း ၁၆ ရာစုမှတ် တမ်းများတွင် အင်္ဂလန်နှင့် ၁၈၇၀ တွင် စပိန်၌ နွယ်ချိုကို တွင်ကျယ်စွာ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်တွင် ထုတ်လုပ်သော နွယ်ချိုသည် Glycyrhiz uralensis ဖြစ်၍ အိန္ဒိယနွယ်ချိုကား G.glatra ဖြစ်ရာ မျိုးစုထွက်မျိုးစိတ် ကွဲဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘာသာဖြင့် နွယ်ချိုကို ကန်ဆောင် (Gan Cao) ဟု၍ခေါ်တွင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ယနေ့ အချိန်ထိ ပြည်ပမှနွယ်ချို တင်သွင်းနေပြီး မြန်မာ့မြေတွင်နွယ် ချိုစစ်စစ် မထုတ်လုပ်နိုင်သေးချေ။ တန်ဖိုးအားဖြင့် တရုတ်မျိုးက အ နည်းငယ်ဈေးနှုန်းမြင့်သည်။ သို့ဖြစ် ၍ မြန်မာ့ဆေးလောကတွင် မရှိမ ဖြစ်နွယ်ချိုအား စိုက်ပျိုးကုန်အဖြစ် မြန်မာပြည်သားတို့ အားထုတ်ကြိုး
နွယ်ချိုတွင်ပါဝင်သောအဓိက ဓာတုပစ္စည်းများကား Glycyrrhizin 6- 14 %, Glycyrramarin, Liquiritin, Glycyrrhizic acid, Glucose, Glucoside, Mannose, Sucrose, Potassium, Calcium တို့အဓိက ပါဝင်ကြသည်။
နွယ်ချိုတွင် အဆိပ်ဓာတ်မပါရှိ၊ အဆိပ်သင့် ရောက်မှု အလွန်နည်းပါး လှသည်။ နှစ်နှင့် ချီ၍ ကြာရှည်စွာ စားသုံး ပါမှ ကိုယ်တွင်း ၌ ရေဓာတ် လွန်ကဲခြင်း ဖြစ်စေတတ်သည်။ သွေး ဖိအား လည်း တက်လာ တတ်ကြောင်း မှတ်တမ်း ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဆေးဝါး တို့၏ သဘောတရား တွင် မည်သည့် အခါမှ နှစ်တာရှည်စွာချီ၍သုံးစွဲလေ့ မရှိချေ။
နွယ်ချို၏ ပင်ကိုသဘာဝအရ ချို၍မျှတသည်။ နွေးထွေးမှု ပေး သည်။ တရုတ်ပြည် တွင် စွမ်းအင်ပေး သောဆေးဝါး အုပ်စုတွင်ဂျင်ဆင်းနှင့် တစ်ပြေးတည်းတန်ဖိုးထားသုံးစွဲသော ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဆာ အိမ်နာ၊ သရက်ရွက်၊ နှလုံး၊ အဆုတ် ဝေဒနာတို့ အတွက် အာနိသင်ထက် မြက်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
Chinese Pharmacopoeia (နှာ-၅၆၇) တွင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်း Ying Yang မျှတစေခြင်း၊ အဆိပ် တို့ကို ပြေပျက်စေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးနာ၊ လည်ချောင်း နာဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးတုန် ခြင်း၊ အစာအိမ် လမ်းအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ အရိုးအကြောကြွက်သားတို့ကို အား ပေးခြင်း၊ ယားယံခြင်း ဝေဒနာနှင့် သွေးနှင့် စွမ်းအင်ပေး ဆေးဝါးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း တို့ဖြစ်၍အသုံးပြုပမာဏ မှာ တစ်ကြိမ်သုံး ၁ ဒသမ ၅ ဂရမ်-၃ ဒသမ ၈ ဂရမ် ဟူ၍ဖော်ပြရာ ဆေးကောင်းလျှင် သန်းခေါင်း ပမာ ဏမျှသာ သုံးသင့် သည်ဟူသော မြန်မာစကားပုံရှိပါသည်။
နွယ်ချိုတွင်ပါဝင်သည့် Glycyrrhizic acid သည် Adrenaline, Epinephrine တို့နှင့် အာနိသင်ဆင် တူသည်။ ကိုယ်တွင်း ရေနှင့်ဓာတ် ဆားတို့ စုပုံခြင်းနှင့် ပိုတက်စီယမ်အိုင်း ယွမ်းဓာတ် တို့ကို ထိန်းညှိခြင်းပြုသည်။
အက်ဒီဆင် ရောဂါနှင့် ဆီးနှင့်ပတ်သက် သော ဝေဒနာတို့တွင်အသုံးပြုသည်။
Glycyrrhizin ဓာတ်သည် အ ဆိပ်ဖြေသည့် သဘောရှိသည်။ Glycyrrhizic acid နှင့်ပေါင်းကာ အ ဆိပ်ဖြေခြင်း ဖြစ်သည်။ နွယ်ချိုစား ခြင်းဖြင့် ဆီးရွှင် စေကြောင်း မှတ်တမ်း ရှိ၍ နွယ်ချိုကို ကော်တီဇုန်းအစား ထိုး အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆေးဝါးအဖြစ် ဖော်ပြသည်။
နွယ်ချိုကို ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ နှံ့စပ်ကျွမ်းဝင်သော သမားတိုင်း အ လေးအမြတ် ပြုခဲ့ကြသည်။ နွယ်ချို ကိုအရှေ့တိုင်း၊ အနောက်တိုင်း ဆေး ပညာလောကသား တိုင်း အစာအိမ် ဝေဒနာ အတွက်အားထား ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အချို့ ကမူ
နွယ်ချိုအကြောင်း သေချာဂဃဏန မသိရှိကြချေ။ စာ ရေးသူသည် တစ်ခါက လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးဌာန အောက်ရှိ မြန်မာ့ ၀ါနှင့် ပိုးချည်လုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ် သော ဆီရီမိုဂျင် (Serimogin) အားတိုးဆေးကို စီစဉ်ထုတ်လုပ်ပေး ခဲ့ရာ အနောက်တိုင်းဆရာဝန်အချို့ (Sericine) Protein ရရှိသည်။ Pupa တို့ကိုမသိရှိကြချေ။ စာရေး သူက Chinese Pharmacopoeia, Japanese Pharmacopoeia နှင့် Korean Pharmacopoeia တို့တွင်ပါရှိကြောင်းပြောပြခဲ့ ဖူးသည်။ ဤသို့ပြောပြမှ အနောက် တိုင်း Pharmacopoeia တို့ကိုသာ အဖတ်အရှုများသော မိမိတို့၏အနေ အထားကို သတိပြုမိ ဟန်ရှိသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကား ဆရာဝန်တင်ရွှေ ကဲ့ သို့သော ဆေးပညာရှင် ဟူ၍ စာရေး သူက ကျေနပ်စွာ စိတ်ထဲကချီးကျူး လိုက်မိသည်။
အကြောင်းကား ဤသို့ဖြစ် သည်။ ဆရာဝန်များ လက်ခံ သုံးစွဲ သော မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာ့ဆေးပင်များ စာအုပ်(ဆရာဝန်တင်ရွှေ) စာမျက် နှာ ၁၆၀ တွင် နွယ်ချိုကို စင်တင်ရေး သားထားသည်။ ဆရာဝန်တင်ရွှေ သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးလောကတွင် စာအစုံနှံ့စပ်စွာ ဖတ်၍ လေ့လာခြင်း ပြုသော စာရေးဆရာ ကောင်းလည်း ဖြစ်၊ သမားကောင်း လည်းဖြစ်သည်။ သူမသိသည်ကို လည်း စာမျက်နှာ ၂၆ တွင် တင်ပြထားသည်မှာ ချီးမွမ်း ဖွယ်ရာ ကောင်းလှသည်။ ကြည့်ပါ။
“မြန်မာလို လစ်ကရက်ဆီကို လေထိုးလေအောင့် ရောဂါအတွက် သူအကြိမ်ကြိမ် သုံးစွဲခဲ့သည်။ နိုင်ငံ ခြားမှ လာသော အစာအိမ်နှင့်ပတ် သက်သည့် ဆေးတွင် လစ်ကရက်ဆီ ပါဝင်ကြောင်းနှင့် တန်ဖိုးရှိ အာနိသင် ထက်မြက်သည် ကို သူသိသည်။ သို့ ရာတွင် လစ်ကရက်ဆီ (Liquorice) သည် နွယ်ချိုဖြစ်ကြောင်း သူ မသိရှိခဲ့ ကြောင်းနှင့် ဆရာဝန် သက်တမ်းနှစ် ပေါင်း ၂၀ ကျော်မှ အစာအိမ်လမ်း တစ်လျှောက်ဖြစ်ပွား တတ်သောရော ဂါများစာအုပ်ကို ရေးသား ပြုစု၍ ဆ ရာဝန်ကြီးပါမောက္ခ ဦးမျိုးသွယ်အား တည်းဖြတ် စေသောအခါမှ လစ်က ရက်ဆီကို ဆရာဦးမျိုးသွယ်က နွယ် ချို ဟူ၍ ပြင်ပေးခဲ့ ကြောင်းဝန်ခံရေး သားခဲ့ သည်။ ထိုအခါမှ နွယ်ချိုကို သူသိရှိခဲ့လေသည်။
မှန်ပါသည်။ နွယ်ချိုသည် အ နောက်တိုင်းဆေး လောကအတွက် လစ်ကရက်ဆီ (Liquorice) အမည် ဖြင့်ထင်ရှားလျက် အစာအိမ်နာ၊ အူ သိမ်ဦးနာ (Duodenal Lilcer) တို့ တွင် တစ်မျိုးတည်းနှင့်ကောင်းသော အားထားဖွယ် ဆေးဝါးဖြစ်သည်။ မုတ်ခါးကဲ့သို့ ပျို့အန် စေတတ်သည့် ဆေးများ၊ ကွီနင်း၊ ကက်စ်ကာရာ (Cascara)၊
ရုဗတ် (Rhubart) တို့တွင် နွယ်ချိုရောပေးလေ့ရှိသည်။ နွယ်ချိုတွင် Glycyrrhizin ၆-၁၄% ပါဝင်၍ ချိုသောအရသာရှိသည်။ Glycyrrhizin ပါဝင်သော အပိုင်း တွင်မူ ခါးသက်သက်အရသာရှိသည်။
ဖော်ပြအပ်သော နွယ်ချို၏ အာနိသင်များကို တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ ဂျပန် ဆေးကျမ်းတို့တွင်ပါ ၀င်ပြီးဖြစ်၍ လက်ရှိ ဆေးလောက တွင် အားကိုးအားထားပြုနေဆဲဆေး ၀ါးအမျိုးအစားတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆေးဝါးလောက ၌သာမက အမျိုး သမီး တို့၏အလှအပ ဆိုင်ရာမျက်နှာ အလှကို နုညံ့စေရာတွင် နွယ်ချိုပါ ၀င် ဖွဲ့စည်းသော အလှဆင် ဆေးဝါး ပေါင်းတင်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် နာ မည်ရ ဆေးတစ်လက် လည်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ နွယ်ချို၏အာနိသင်နှင့် ပတ် သက်၍ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီလျက်အ တွေ့အကြုံမှ လာသောဆေးကောင်း တစ်လက်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ သည် စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့်အသုံးချလျက် ရှိရာ သံသယ စိတ်လုံးဝမရှိခဲ့ပါချေ။
သို့ရာတွင် မကြာသေးမီကာလ က ဂျာနယ်တစ်ခုတွင် (Vol.9, No.44 January 27, 2011) စာမျက်နှာ ၁၄ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွင် နွယ်ချို နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းတို တစ်ပုဒ် ပါရှိလာခဲ့သည်။ ဖော်ပြခဲ့ရာတွင်-
ဆေးမြီးတို များဖြင့် ကုသရာ တွင် အဓိကအားဖြင့် နွယ်ချိုကို သတိ ထားရှောင်ကြဉ် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ထားသည်။ အမှန်အားဖြင့် နွယ်ချိုသည် ဆေးမြီးတို သုံးဆေးပ စ္စည်းမဟုတ်ပါ။ သမ္ဘာရင့်ဆေး အမျိုး အစားကို ဆေးမြီးတိုမခေါ်ပါ။ ဆေး မြီးတို(ဆေးနည်းတို)၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အလွယ်တကူ ဖော်စပ်သုံးစွဲနိုင်သော ဆေး (မြန်မာအဘိဓာန် စာ ၁၂၀) ဟူ၍ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ နွယ်ချိုသည် အလွယ်တကူ ဆူလွယ်နပ် လွယ်သုံး ကြသည့် ဆေး မဟုတ်ပါချေ။ သမ္ဘာ ရင့်
သက်တမ်းထောင်ချီရှိ၍ အတွေ့ အကြုံမှ လာသောအာနိသင် စွမ်းအား နွယ်ချိုမှာပြည့်စုံ လှပါသည်။ သို့သော် ကုသ သုံးစွဲသည့် သမားတော်တွင် လည်း ကြွယ်ဝသောကုသမှုအတွေ့ အကြုံများရှိရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဂျာနယ်တွင် ဆက်လက် ဖော်ပြထားသည်မှာ (နွယ်ချိုသည် ဆေးမြီးတိုများ ဖြစ်သည့်အလျောက်၊ လျက်ဆား၊ လျှာပွတ်ဆေး၊ သွေးဆေး အစ ရှိသည့် ဆေးမြီးတိုများစွာတွင် နွယ်ချို ပါဝင် လေ့ရှိ သည့်အတွက်)ဟူ ၍လည်းကောင်း၊ (နွယ်ချိုသည် အ ကောင်း ကနေ ရုတ်တရက်ဗိုက်ကြီး ဖောင်းပြီး) ဟူသော တင်ပြချက်နှင့် (လူနာသည် နွယ်ချို အတောင့်လိုက် တစ်နေ့ တစ်ထုပ်စားတယ်။ အဲဒီက တည်းက သွားတာပဲ) ဟူသောစကား ရပ်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာတင်ပြလိုသည်မှာ နွယ်ချိုသည် ဆေးဖြစ်ပါသည်။ အ ပျော်စားနိုင်သော အာဟာရမဟုတ် ပါ။ ဆေးဝါး ကိုကျွမ်းကျင်သောသ မားတော်က ညွှန်ကြားမှ သာစားသုံး ခြင်းနှင့် ဘာကြောင့် စားရသည်ကို မသိရှိ ဘဲမိမိဖာသာ စားသုံးခြင်းသည် အဓိက အမှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဆောင်းပါးတွင် ပါရှိပြီးဖြစ်သည့် နွယ် ချိုစား သုံးရမည့် ဆေးချိန် ပမာဏကို သတိပြုပါ။ ၁ ဒသမ ၅ မှ ၃ ဒသမ ၀ ဂရမ် (မြန်မာ တစ်ပဲခွဲမှ သုံးပဲ) ခန့် သာ ညွှန်ကြား ထားပါသည်။ (တစ် ကျပ်သား ၁၆ ဂရမ်နှင့် ညီမျှပါသည်) မိမိဖာသာ စား၍ချိန်ဆမှု လည်းမရှိ စားသုံးမိက ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ဖြစ် မှသာ ကြောက်လန့် စိုးရိမ်ခြင်းနှင့် တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုသော ဆောင် ပုဒ်
စကားကိုလည်း နားလည် ဟန် မတူချေ။ ပဋိဇီဝ ဆေးပေးရမည့်နေ ရာတွင် လေနိုင် ဆေးပေးခြင်းနှင့် ငှက်ဖျား ရောဂါအတွက် သာမန်အ ဖျားကျ ဆေးပေးခြင်းတို့သည် အကျိုး သက်ရောက်မှု ဘာမျှ ရရှိလာမည် မဟုတ်ပါ။
သို့ဖြစ်၍ နှစ်ပရိစ္ဆေဒ ထောင်ချီ ၍ သမ္ဘာရင့်ကျက်မှုရှိသော ဂန္ထ၀င် ဆေးဝါးနွယ် ချိုအား မိမိဖာသာစနစ် တကျမ သိရှိဘဲ စားသုံးပြီးပါမှ က ယောင်ကတန်း ချောက်ချားစွာတင်ပြ ပြောဆို ရေးသားခြင်းတို့သည် အသိ မဲ့စွာ လက်တည့်စမ်း လုပ်ဆောင်ပြီးမှ အားကိုး ရာရှာကြံနေသည်နှင့် တူ နေပါ သည်။ မိမိမကျွမ်းဝင် နားမလည် သော ဆေးဝါး အပေါ်လည်း အမြင် မှား နှင့် ရှုတ်ချနေသည်နှင့် တူနေပါ သည်။ နွယ်ချို အနေနှင့်ကား မိမိ၏ မဆင်မခြင် စားသုံးမှုကြောင့် နာမည် ပျက်သွားမည် မဟုတ်သော်လည်း မိမိမှာမူ လုပ်ဆောင်မှုမ မှန်ကန်ခြင်း ဖြင့် ဝေဒနာ ပိုမိုခံစားသွားရသည်ကို သတိမူသင့်ပါသည်။
ဂျာနယ်အနေ နှင့်အပြုသဘော သတိပေး ချိန်ဆနိုင်ရန် ရေးသားတင် ပြပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်စဉ် တစ်ရပ်အား တစ်ဖက်မှသာတင်ပြ ပေးခဲ့ရာ သမ္ဘာရင့်နွယ်ချိုအပေါ်မ သိနားမလည်သူ ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်က တလွဲလုပ်၍ အပြစ် ပုံချသောအခါ နွယ်ချိုကိုအပြစ်ဆို ထားရာ မိမိ၏အားနည်းချက်များ ဆေးဝါးဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် မိမိအ ပေါ်ညွှန်ကြားသူ ပညာရှင်မရှိပါဘဲ လျက် လွယ်လင့်တကူလုပ်ဆောင်မိ ခဲ့သည့် မိမိကိုယ်သာအပြစ်တင်ရပါ မည်။ သို့သော်ယခုအခါနွယ်ချိုသည် သာတရားခံဖြစ်နေပါသည်။
ဆင်ခြင်တုံ တရားနည်းပါးစွာ ဖြစ်ပေါ်လာမှ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့် တတ်သူတို့အား
စံနမူနာပြု၍ နွယ် ချိုအပေါ် အပြစ်တင်စောခြင်း၊ သ တင်းပေး (Message) စောခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အစား ဂျာနယ်ရေးသား သူဘက်မှ လည်း ဆေးဝါးတတ်ကျွမ်း နားလည်သူ (ယုတ်စွ အဆုံးသက် ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းဆေးပညာဌာန၊ သု တေသနဌာနမှ ပညာရှင်များ) တို့ထံ နွယ်ချို အကြောင်း ဤသို့ဖြစ်ပျက်နေ ကြောင်း၊ နွယ်ချိုသည်မည် သို့သော ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းပထ မဦးစွာစနည်းနာ စူးစမ်းရင်းချိန်ဆနိုင် ပါသည်။
နွယ်ချိုနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ ဝေဒနာခံစားရသူ၏ တင်ပြချက်ကို သာ တစ်ဖက်သတ်တင်ပြပေးသလို ဖြစ်ခဲ့ရာ အဆိုပါ ဝေဖန်ရေးသားမှု ဂျာနယ်မှာ ပါလာပြီးကတည်းက ဆေးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုနေသူများ၊ တိုင်းရင်း ဆေးဝါးထုတ်လုပ်နေသူများ၊ တိုင်း ရင်းဆေးလောကမှ သမားတော်ကြီး များ၊ တိုင်းရင်းဆေးကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၊ တိုင်းရင်းဆေးအ ပေါ်မှီခို အားထားလေးစားနေသူများ ကြားတွင် နွယ်ချိုကိစ္စ အရေးအသား များကြောင့်များစွာ ပွက်လောရိုက် သွားခဲ့ပါသည်။
ဤသို့သော ရေးသားတင်ပြမှု များသည် အချိန်ယူလေ့လာပြီးမှရေး သားရမည့်သတင်းပေးပို့ချက် အမျိုး အစားဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ သမ္ဘာ ရင့်သောနွယ်ချို၏ ဆေးစွမ်းဂုဏ် သိက္ခာနှင့် မိမိဖာသာကောင်းနိုးနိုး စားသုံးမိသူ (လက်တည့်စမ်းမိသူ)တို့ အပေါ်ဘက် နှစ်ဖက်မှသုံးသပ်အကဲ ဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မစုစုနွေးဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် စက်တင်ဘာသံဃာ့အရေးအခင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်ခွဲ ချမှတ်ခံရကာ ကလေးထောင်ကနေ တဆင့် ခန္တီးထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့ခံထားရသူဖြစ်ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ဒုတိယအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မစုစုနွေးက သူမ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံတွေကို ရှင်းလင်းပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
10/17/2011 11:12:00 PM
အသုံးစရိတ်ကို ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့ရာတွင် ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် အသုံးစရိတ်မှာ အခြားသော ဌာနများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်အရ (၂) ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိနေသည်။ ဤဘတ်ဂျတ်ငွေနှင့် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ် ၁၃ သန်းခန့်အတွက် မည်သို့မျှ မလုံလောက်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညောင်တုန်းမြို့ ဘကကျောင်း တစ်ကျောင်း
၂၀၁၃ စာသင်နှစ်မှစ၍ မူလတန်းလွန်ထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေသော ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းများ အား အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအထိ တိုးချဲ့သင်ကြားခွင့် ရရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ “ဘုန်းကြီးတို့ဘက်က လာမည့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် စပြီဆိုတာနဲ့ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအထိ ပညာ သင်ကြားခွင့်ရသွားပါပြီ၊ အဲဒီအတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာကို ကျေးဇူးတင်နေတယ်၊ ဖွင့်ခွင့် ရပြီဆိုတော့ ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကို ဆရာ အသစ် ခေါ်ဖို့အတွက်ရော ကျောင်းစာသင်ဖို့ နေရာတွေ အတွက်ကိုပါ အခုကတည်းက ပြင်ဆင် ထားနေတယ်”ဟု မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မူလတန်းလွန်အထိ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှ ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ စန္ဒောဘာသ က မိန့်ကြားသည်။ အဝေရာ - ရွာမရန်ကင်း ဘကကျောင်း (MySuboo)
ယနေ့တိုင် အခြေခံပညာ အထက်တန်းအထိ ပညာ သင်ကြားခွင့် ရရှိသော ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း နှစ်ကျောင်းသာရှိ၍ အများစုမှာ အခြေခံပညာမူလတန်းနှင့် မူလတန်းလွန် အထိသာ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးနေသော ကျောင်းများဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလပိုင်းတွင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများနှင့် ပတ်သတ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် မူလတန်းလွန် အဆင့်မှ အခြေခံပညာ အထက်တန်းနှင့် အလယ်တန်းအထိ တိုး၍ ပညာသင်ကြားခွင့်ပြုရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာမှ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့်အထိ သင်ကြားရန် ညွန်ကြားခဲ့သည်။ “ဒီဘုန်းတော်ကြီးသင်
ပညာရေး ကျောင်းတွေကို အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအထိ ကိုပညာသင်ကြားဖို့အတွက် တောင်းဆိုတာ အဆင်ပြေတဲ့အတွက် အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအထိ ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ အတွက်ကို ပြင်ဆင်နေကြတာပါ၊ တခြားဒေသက မူလတန်းလွန်အထိ သင်ကြားနေကြတဲ့ ကျောင်းတွေလည်း အလယ်တန်းအထိ ပညာ သင်ကြားပေးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေကြတယ်”ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ ရွှေသမား ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လာဘိဝံသက မိန့်ကြားသည်။
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး သင်ကျောင်းပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် ရှိပြီး တက်ရောက်သင်ကြားနေသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားပေါင်း ၂ သိန်းကျော်တက်ရောက် သင်ကြား နေလျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုအရေအတွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပညာ သင်ကြားလျက်ရှိသော ကျောင်းသားများ၏ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဖြစ်ကြောင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းများအတွက် ပြုစုထားသော စစ်တမ်းတစ်ခု၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရပါသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ
ကျောင်းမနေနိုင်ရှာကြသည့် ကလေးငယ် သိန်းပေါင်းများစွာအတွက် အားတက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သော်လည်း ပညာရေး စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီသော အတွက် ပညာရေး
ကောလိပ်ဆင်းနှင့် ဘီအီးဒီဘွဲ့ရ ဆရာများ ရရှိရန် အခက်အခဲရှိသည်ဟု မန္တလေးတိုင်း၊ နယ်မြေလေးတစ်မြို့ရှိ အမည်မဖော်လိုသူ ဘကကျောင်းမှ ဆရာတော်တစ်ပါးက မိန့်ကြားခဲ့သည်။
“တချို့ကလည်း ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့က ဦးဇင်းတို့ရဲ့ နယ်မြို့လေးမှာက စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းပဲ ရှိတာ။ အနီးအပါး ရွာတွေက ကလေးငယ်တွေအတွက် ဘယ်လိုမှကို အဆင်မပြေတော့ ဒီ စာသင်ကျောင်းကို ဦးဇင်းတို့ရဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲက ဆွမ်းစားဆောင်မှာ စဖွင့်ပေးခဲ့တာ။ ၅ နှစ် လောက် ရှိပါပြီ။ အခုတော့ ကလေးငယ် ဦးရေ ၇၀၀ ကျော်ပါပြီ။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်နဲ့ပါ။” မောက္ခ ဘကကျောင်းရေးရာ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စရင်း ကွာဟနေ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ ၆၀၀ ခန့်သာရှိရာ သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်ဖြင့် ထက်ဝက် ခန့် လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ဆွီဒင်နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယိုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ပြောဆိုသည်။
အင်းစိန်ထောင်ရှေ့တွင် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်လာမည့်သူများကို လာရောက် စောင့်ဆိုင်းနေသော အကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များ (ဓာတ်ပုံ - AP)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၀၀၀ ခန့်ရှိသည် ဆိုခြင်းသည် ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများသာဖြစ်ကြောင်း၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်ဖြင့် ဦးရေ ၃၀၀ ခန့် လွှတ်ပေးပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် လွှတ်ပေးမှုနှုန်းမှာ နည်းပါးသည်ဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ မကြာမီကာလအတွင်း ထပ်မံလွတ် မြောက် လာဦးမည်ဟု ထင်ကြောင်း
အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ကို ပုဒ်မ ၅(ည)၊ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)
စသည့် နိုင်ငံရေး ပုဒ်မများဖြင့် အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခြင်း မပြုဘဲ၊ အီလက်ထရွန်နစ် အက်ဥပဒေ၊ တရားမ၀င်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်မှု၊ ဗုံးဖောက်ခွဲရန် ကြံစည်မှု၊ မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှု၊ ပုံနှိပ် အက်ဥပဒေ စသည့် ဥပဒေပုဒ်မ များဖြင့် စွဲဆိုကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စာရင်းကွာဟမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကိုတိုးကျော်လှိုင်က ပြောဆိုသည်။
အကျဉ်းကျခံနေရသူများ”ဆိုသည့် စကားရပ် အပေါ်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကွဲလွဲမှုများ ရှိနိုင်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အစိုးရက ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့(အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့)တွင် အကျဉ်းသား ၆၃၅၉ ဦး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေး ရာတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
ပြည်ပ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း(AAPP) ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က လည်း အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင်
ကျန်ရှိနေသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ စာရင်းနှင့် ယခု လွတ်မြောက်လာသည့် စာရင်းကို ပြုစုနေကြောင်း၊ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
10/17/2011 11:03:00 PM
သမ္မတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင် နဲ့ ဧရာဝတီ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များ အတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အရေအတွက် ၆၀၀ ပဲ ရှိသည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ နိုင်ငံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးကိုကိုလှိုင်
က ဆွီဒင်နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယိုတွင် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအရေအတွက်သည် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက ပြုစုထားသော စာရင်းနှင့် ကွာခြားမှုရှိနေပါသည်။ ယင်းသို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အရေအတွက် စာရင်း ကွာခြားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီက ဦးကိုကိုလှိုင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
သမ္မတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင် (ဓာတ်ပုံ - flower news)
ဖြေ။ ။ အဲဒါတော့လည်း ကျနော်တို့က
သေချာမသိဘူးပေါ့နော်။ သို့သော်ငြားလည်း တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ ပြောနေကြတာတော့ နောက်ထပ် လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်လိုတော့ ပြောနေကြတာပဲ။ ကျနော်တို့ကတော့ အကြံပေးဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုးအင်မတန် တိကျတဲ့ သတင်းမျိုးတွေကတော့ ကျနော်တို့က ပြောနိုင်ဖို့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံပြီးတဲ့ အခါမှာကျတော့ မြစ်ဆုံဆည် ရပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စ။ အဲဒါတွေကို အပြင်ရော အတွင်းရောကနေပြီးတော့ အကောင်းမြင်ခဲ့ကြတာကိုးဗျ။
အခုလွှတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာတော့ အားလုံးက သိပ်ပြီးတော့ အားရကျေနပ်မူမရှိဘူး။ တချို့တွေ ပြောကြတာတော့ ရှိတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရှိန်လျှော့သွားပြီ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတောင် သုံးကြတော့ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဦးကိုကိုလှိုင်အနေနဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ အကြံပေးတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ သုံးသပ်မိလဲ။
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ တခြားလုပ်စရာ ရှိတဲ့အထဲမှာ ကျနော်တို့ မြင်ကြည့်တာကတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲရပ် ဆိုင်းရေးကိစ္စတွေ ပါတာပေါ့နော်။ လွှတ်တော်မှာ ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ အစိုးရတွေကလည်း တိုင်း ရင်းသားဒေသတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ လုပ်နေတာတွေ ရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က တောင်းဆိုနေ တဲ့ အတိုင်းအတာကလည်း
တပြည်လုံးအတိုင်းအတာရဲ့ အပစ်ရပ်ဖို့ နိုင်ငံရေးစကားပြောတဲ့အခါမှာ ခွဲမတွေ့ချင်ဘူးတို့ အဲဒီလိုမျိုး တွေ တောင်းဆိုမူတွေ ရှိနေတော့ စစ်ပွဲကို ဘယ်လို ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်မယ်လို့ ဦးကိုကိုလှိုင်အနေနဲ့ ယူဆပါသလဲ။
မေး။ ။ နှစ်ဘက်အပြန်အလှန် အပေးအယူ ညှိနိုင်းလုပ်ရတဲ့ ကိစ္စမှာ ကျနော်ထင်တယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ NLD ကိစ္စလည်း ပါမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ NLD မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စပေါ့ နော်၊ ကျနော်တို့ ကြားနေရသလောက်ဆိုရင် အစိုးရဘက် ကလည်း လွှတ်တော်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ဥပဒေပြန်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်ရေး ဆွေးနွေးနေတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဦးကိုကိုလှိုင် အနေနဲ့ နှစ်ဦး နှစ်ဘက် အနေအထား ဘယ်လောက်အထိ ညှိနိုင်းပြီးတော့ ဘယ်အတိုင်းအတာလောက်မှာ သဘော
တူညီချက် ရသွားနိုင်မယ်လို့ သုံးသပ်မိလဲ ခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီဥစ္စာကတော့ အပြင်ဘက်ကနေ မှန်းကြည့်တာတော့ နည်းနည်းတော့ ခက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါကတော့ ဥပမာဖြင့် ဆိုရင် NLD အပိုင်းမှာည်း သူ့ရဲ့ CEC ရော နောက်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေရော ပြန်ပြီးတော့ ညှိရဦးမယ့် ကိန်းပဲ။ ဒီလိုပဲ အစိုးရ ဘက်မှာလည်း လွှတ်တော်ရော အစိုးရဘက်ကရော ဒါတွေက ညှိကြရတဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ကျနော်တို့လည်း စောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့လေ။ နှစ်ဘက် ပုံသေ
ဘယ်တော့လောက် ပြီးနိုင်မလဲဆိုတာတော့ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်က လည်း လူသားတွေဖြစ်တဲ့ အခါမှာကြတော့ စိတ်တွေကလည်း အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာကိုး။ ညှိရမယ့်အချိန်ကတော့ နည်းနည်းတော့ ပေး ရမယ်လို့
ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ သိပ်ပြီးတော့ အရမ်းကြီး ကြာလိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒါဟာ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာတော့ နှစ်ဘက်စလုံးက သဘောပေါက်ထားကြတာကိုး။
ဖြေ။ ။ တကယ်တမ်းကတော့ ကျနော့် အမြင်ကတော့ အာဆီယံရဲ့ ဥက္ကဌနေရာကို လက်ခံရယူဖို့ ကိစ္စကတော့ အာဆီယံ ချာတာ အရဆိုရင် ကျနော်တို့ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဖို့ လိုတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေက အက္ခရာအစဉ်အလိုက် ရယူရတဲ့ ကိစ္စပါ။ သို့သော် လည်းပဲ ထူးခြားတဲ့အကြောင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ အာဆီယံဥက္ကဌရာထူးနေရာကို တခါတုန်းက ကျနော်တို့သူများ ကို လွှဲပြောင်း ပေးလိုက်တာပေါ့လေ။ ဒီတခါ ကျနော်တို့က ပြန်ပြီးတော့မှ အဲဒီကနေ ပြန်ပြောင်းယူရမယ့် အလှည့်ပါပဲ။ ဆိုတော့က ဒီဥက္ကဌရာထူးရဖို့ တခုတည်းနဲ့တော့ လုပ်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့က ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့၊ သွားရမယ့် ချီတက်ရမယ့် လမ်းကြောင်း၊ ဒီအတိုင်းမှန်မှန်ပဲ သွားနေတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီဟာကို ပေးသင့်
မပေး သင့် ဆိုတာကတော့၊ အကဲဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ သက်ဆိုင်ရာဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသာ ဆုံးဖြတ် မယ့် ကိစ္စပဲ။ အဲဒီတော့ သူတို့က ကျနော်တို့အပေါ်မှာ လာကြည့်ပြီးတော့မှ သူတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ပေးမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ပေးဖို့ကတော့၊ ကျနော်ကတော့ များတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့၊ သွားနေတာက မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ့။ တကယ်လို့များ
မြန်မာနိုင်ငံကို လုံလောက်တဲ့ တိုးတက်မူမရှိဘူး ဆိုပြီးတော့မှ အာဆီယံဥက္ကဌကို မပေးသေးဘူးဆိုရင် အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီးပေါ်မှာ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ ယုံကြည်မူဟာလည်းပဲ အများကြီးလျော့ကျသွားမယ့် အနေအထားမျိုးတွေ ရှိနိုင်တယ် လို့ ကျနော်ထင်တယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံလောက်မှ ဒီမိုကရေစီ မရှိသေးတဲ့နိုင်ငံတွေ အာဆီယံထဲမှာ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်။ ဆိုတော့က ပေးဖို့အတွက်ကတော့ ပိုပြီးတော့ အများကြီးအားသာပါတယ်။ သို့သော် တဘက် တလမ်း ပြောကြရင် ကျနော်တို့က အာဆီယံ ဥက္ကဌရာထူး ရဖို့အတွက် ဒါတွေလိုက်လုပ်နေတာတော့
မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကိုယ့်အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား ပြည်သူ လူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် မှန်မှန် ဆက်ပြီးတော့မှ ချီတက်သွားမယ့် အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ရ တာလည်း ပဲ ကျနော်တို့ စာမေးပွဲဖြေတာမျိုး မဟူတ်ဘူးလေ။ အခြေအနအရ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ စိန်ခေါ်မူတွေက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဒီလိုပဲပေါ့ ဆန့်ကျင်မူတွေ ခုခံမူတွေက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းတွေက နေပြီးတော့ ဒီလုပ်ရပ်တွေကို ၀ိုင်းပြီးတော့မှ အားပေးထောက်ခံ
ပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ။
10/17/2011 11:01:00 PM